အိမ်ထောင်စုသန့်ရှင်းရေး Partner - ဘက်စုံသုံး Effervescent Cleaner မှုတ်ဆေးဘူး
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / ဘက်စုံသုံး Effervescent Cleaner မှုတ်ဆေးဘူး
all-ရည်ရွယ်ချက်အိမ်မှာ effervescent သန့်ရှင်းရေးတက်ဘလက်။
ဒီထုတ်ကုန်တိုက်ရိုက်ဖြန်းသို့ရေနှင့်ရော high-performance ကိုပေါင်းစည်းသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်သည်အလွန်သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ, မီးဖိုချောင်အကွာအဝေးပါးပျဉ်းအစွန်းအထင်း, စသည်တို့အိမ်သာကြွေကြွေပြားအစွန်းအထင်း, မော်တော်ကားအတွင်းပိုင်းတောင်မှသစ်သားအရောင်, အဝတ်အစားအစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ် superbly တောက်ပသင့်အိမ်စွန့်ခွာ။ အဆိုပါဘက်စုံသုံး effervescent မှုန်ရေမွှားသန့်စင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်ရှည်, Anti-အိုမင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ရှိပါတယ်။ စက်ရုံအားဖြင့်တိုက်ရိုက်အရောင်း, အသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းအာမခံပါသည်။
♣တစ်-piece အသန့်ရှင်းမရှိ, ဓာတုအရောင်ချွတ်အရောင်တင်မှုနှင့်အတူ။
မွေးမြူရေးကနေဘက်တီးရီးယားတားဆီးဘို့ Excellent ကအကျိုးသက်ရောက်မှု♣။
♣တစ်ဦးက 1PC တက်ဘလက်ရေ 500ML မှတူညီနိုင်ပါ။
ဘက်စုံသုံး Effervescent ၏အားသာချက် Cleaner မှုတ်ဆေးဘူး
အဆိုပါ Effervescent ရေမှုံရေမွှားသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရေ, အနိမ့်အမွှုပျထနှင့်သုတ်ရန်လွယ်ကူနှင့်အဆက်အသွယ်လျင်မြန်စွာအရည်ပျော်သွားပါသည်။
ထိုသုံးပါ ဘက်စုံသုံးသန့်စင် 500ml အစွမ်းထက်ဘက်ပေါင်းစုံသန့်ရှင်းရေးရေလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလုံအလောက်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်
ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြတင်းပေါက်များတွင်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်, ကြမ်းပြင်, ရေချိုးခန်း, etc
စင်ကြယ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ပိုမိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့် Non-အဆိပ်သင့်။ ဒါဟာလုံးဝသင့်ရဲ့သာမန်သန့်ရှင်းရေးကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့သာဖြန်းလုပ်နိုင်တဲ့မရောင်း, ဤ effervescent သန့်ရှင်းရေးဆေးပြားရောင်း!
အဆိုပါ♦ ရိုးရှင်းအစိမ်းရောင်အားလုံးရည်ရွယ်ချက်သန့်စင် သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်ပြေစေရန်နှင့်ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
♦ကုန်ပစ္စည်းအတိုင်းအတာ: တစ်ဆေးလုံး၏အချင်း 2cm / 0.8 က "တစ်ဦးဆေးလုံး၏အထူ 0.5cm / 0.2 ဖြစ်ပါတယ်" ။
ပစ္စည်းအမျိုးအစားအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့် client ကိုများအတွက်တက်ဘလက်အရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးများချွေစွမ်းဆောင်ရည်♦။ 500ml ထိပ်တန်းသန့်ရှင်းရေးအရည်ညီမျှတက်ဘလက်၏အပိုင်းအစ။
♦စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း, တစ်ဦးအနိမ့်စျေးနှုန်းမှာမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကို! ဘွတ်ကင်ကိုပိုပြီးပမာဏပိုကောင်းတဲ့လျှော့စျေးရှိသည်။
♦ဒါကြောင့်ဖွင့် အမဲဆီများအတွက်အကောင်းဆုံးမီးဖိုချောင်သန့်စင်အိမ်ထောင်စု, ရုံး, မော်တော်ကားအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်အတူ။
သတိပေးချက်: ဒီထုတ်ကုန်တစ်ဦးအေးမြခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရပါမည်, သားသမီးများ၏လက်လှမ်းမမီထားပါ။ မျိုဘယ်တော့မှမ!
ဒီထုတ်ကုန်အင်တိဖရိစ်ဓါတ်ဖန်ရေအတှကျအသုံးပွုလို့မရပါ! သာသန့်ရှင်းရေး function ကိုအဘယ်သူမျှမအင်တိဖရိစ်ဓါတ် function ကိုရှိပါတယ်!
♦ပိတ်ပင်တားဆီးမှု effervescent သန့်စင်တဲ့ဘောဇဉ်ထဲသို့သွင်းထားသည့်မှုတ်အဖုံး, ဖွင့်ပါ။
♦ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေ, 1pc တက်ဘလက် = 500ml ရေတက်ဖြည့်ပါ။
Eco-friendly သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
ဘက်စုံသုံး Effervescent Cleaner အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စာရွက်မှုတ်ဆေးဘူး
ကုန်ပစ္စည်းအထူးအသေးစိတ်။ အချင်း 2.0cm x ကိုအထူ 0.5cm
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. ကုလဲလှယ်ခြင်း.